Carada ka dib markii Pakistan’s Imran Khan xiriir la leh kufsi iyo sida dumarka u labistaan - Wardeeq 24 TV Carada ka dib markii Pakistan’s Imran Khan xiriir la leh kufsi iyo sida dumarka u labistaan Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Carada ka dib markii Pakistan’s Imran Khan xiriir la leh kufsi iyo...
Carada ka dib markii Pakistan’s Imran Khan xiriir la leh kufsi iyo sida dumarka u labistaan
Haweenka u ololeeya haweenka Pakistan iyo kuwa u ololeeya xuquuqda ayaa ku eedeeyay ra’iisul wasaare Imran Khan “inuu jahwareerinayo” ka dib markii siyaasiga cricket-ka u rogay uu ku eedeeyay sida ay haweenku ugu labistaan ​​kor u kaca kiisaska kufsiga.
Wareysi todobaadle ah oo laga sii daayay telefishanka tooska ah, Khan oo wax ku bartay Oxford ayaa sheegay in kufsiga oo kordhay uu muujinayo “cawaaqibka ka dhalan kara bulsho kasta oo fisqigu ku sii kordhayo”.
Madaxweynaha Pakistan ayaa ansixiyay xeerka kahortaga kufsiga
Kumanaan kun oo reer Hindiya ah ayaa ka dalbada garsooraha ugu sareeya inuu is casilo sababo la xiriira hadalada kufsiga
Haweenka Koonfur Afrika ayaa mowqif ka istaagaya dhaqanka kufsiga
Kufsi la sheegay inuu ka dhacay gudaha baarlamaanka Australia
Dhacdooyinka kufsiga ee haweenka have si dhaqso leh ayey bulshada ugu soo bateen, ”ayuu yiri.
Wuxuu kula taliyay haweenka inay qariyaan si looga hortago jirrabaadda.
“Fikradan oo dhan ee purdah waa in laga fogaado jirrabaadda, qof walbaa awood uma lihi inuu iska ilaaliyo,” ayuu yiri, isagoo adeegsanaya erey tilmaami kara labiska suubban ama kala sooca jinsiga.
Boqolaal ayaa saxeexday bayaan ku faafinaya khadka tooska ah Arbacadii, iyagoo ugu yeeray hadalada Khan “xaqiiqda khaldan, dareen la’aanta iyo khatarta ah”
“Khaladku wuxuu ku tiirsan yahay kaliya kufsiga iyo nidaamka awood u siiya kufsiga, oo ay kujirto dhaqan ay kobciso hadalada sida kuwa uu sameeyay [Khan],” ayaa lagu yiri bayaanka.
Previous articleSheegashada musuqmaasuqa ayaa dhalisay walaac cusub oo ku saabsan kaalmada la siiyo Koonfurta Suudaan
Next articleMarkab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas